I-FRP Tank, I-Fiberglass Shell, itanki ye-GRP - Jrain
Iitanki kunye neeVenkile
Iitanki zeNkundla eziNkulu
Ukuntywila kweFibggass kunye nokufakelwa kwezixhobo
IiMveliso eziManyeneyo ze-Fiberglass Dual Lamination
Iimveliso ezenziwe ngeFibglass
Ingqukuqela kunye nokuHlala
Umdlalo kunye neeDampers kunye neeDemon
Umzimba wemoto kunye neBoat
I-Fiberglass Grating kunye nesiHlomelo
Ukutya kunye ne-Inshorensi
I-ladder kunye ne-Handrail
Oomatshini bokucoca iifilimu
Oomatshini bokuhambisa umoya ngeeTanki kunye nemibhobho
I-mandrels kunye neMolds
Ukucoca amanzi kunye nomoya
Amandla e-Thermal kunye neNyukliya
Ukuhambisa imibhobho yokuhambisa kunye nokufakelwa
Izixhobo zokudlala kwindawo yezokhuseleko
SIYINIKELA IINQAKU ZOKUGQIBELA ZAMABALI
Itanki eliqhelekileyo leenqanawa kunye neenqanawa, kubandakanya nezinto zokongeza, zinokwenziwa kulo naluphi na ubume okanye ubume bolungelelwaniso, zibonakalisa ukuguquguquka okungqinelanayo nezinto ezihlanganisiweyo ze-FRP. Sisebenzisa itekhnoloji yethu yobunini, sinokwazi ukwenza iitanki kunye neenqanawa ngokweemfuno ezahlukeneyo zomthengi kwisityalo sethu ke sizithutha zikhuselekile kwindawo yakho. Ngeetanki ezinkulu ezikhulu, sinobuchule obuhlukileyo bokwakha indawo kwisiza sakho ngqo, kunye neyona diame ephezulu ...
Iitanki ezingunxantathu ze-Fibglass zinokwenziwa kwaye zenziwe ngemilo eyahlukeneyo, ubukhulu, imibala, ubungqingqwa, iimeko zenkonzo ezinqwenelekayo, ukufakelwa kwezinto, ukuqhuba, njl. Amashishini amaninzi ahlukeneyo asebenzisa iitanki zecala le-fiberglass kwiinkqubo zawo: 1. Ukuxuba itanki, umhlali, iapile njalo njalo. Amandla enyukliya kunye ne-smelt kunye nomzi mveliso. Jrain makede abahlali abangxande beeprojekthi ezininzi. Kwiiprojekthi ezahlukeneyo, kukhethwa ii-resin ezahlukeneyo ukuhlangabezana neemeko ezahlukeneyo zenkonzo. Umahluko ...
I-Fibglass scrubpent zithandwa kakhulu ngokugcina ulwelo, unyango lwamanzi, inkqubo ye-FGD, ukulungiswa kwamachiza kunye nolawulo lokungcoliseka, inkqubo yokucoca igesi, ukulawula ukuphuma kwegesi, ngakumbi iigesi ezingcolileyo, ukutshiswa kwenkunkuma kunye neenkqubo zokuveliswa kwamandla. Kuba: ngokuthelekisa iimveliso zensimbi okanye ezenziwe ngerabha, iiFordglass zeplastiki eziqinisiweyo (FRP) zineenzuzo ezininzi. I-FRP inobunzima kakhulu, kwaye yomelele kwaye inokuthi iveliswe ngokobubanzi beemayile, ezinesiphumo esithe ngqo ...
Imigulukudu kunye nabahlali
Ukucaca kweFibglass kunye nokuhlala kukhaphukhaphu kunemathiriyeli yentsimbi yesiqhelo, kwaye kukunceda ufumane ezona nkcukacha zidibeneyo kunye zokuhlanganisa ngaphandle kweemveliso. Umjelo unikezela ngeetanki zeentsinga zethayile kunye nezinto ezicacisa ngazo, abahlali, umkhombe wamanzi, ihodi okanye ikhava, ingqokelela kunye namanzi amdaka (amanzi), amanzi amdaka, imigodi kunye nezinye izixhobo zokusebenza. Ubuso be-concave yamacandelo athuthela i-sediment kumngxunya wethambeka. Ngexesha lokuhamba ukubuya, iindawo ezimile njengecandelo ...
Izigqubuthelo zeFiberglass zisetyenziswa kakhulu kunyango lwamanzi nogutyulo lwelindle, ukutya, ikhemisi, njl njl. Imigubasi yeFiberglass yahlukile ngemibala kunye nobume obunjengomjikelo, uxande, iarch, iflethi, uhlobo lwendlu, njl njl njlmnye ngokweemfuno zomthengi. Izigqubuthelo zeFibglass zihlala zenzelwe ukudibana nobushushu obuninzi, ukugqitywa komhlaba ongaphandle kuyaphawuleka ukumelana neemeko ezinzima zemozulu, zenza iflashglass ibe yinto efanelekileyo yokuvezwa kwezinto, kubandakanya nelanga, ...
Ukufakelwa kwe-Fibglass kwenziwa ngokubanzi ngenkqubo yokubeka isandla, kunye nomxholo we-resin ephezulu. Imilo eyahlukeneyo inokufezekiswa ngokusebenzisa iibumba. I-resin ezahlukeneyo zinokukhethwa kwiimeko ezahlukeneyo zaphakathi kunye neenkonzo. Nakuphi na ukufakelwa okukhethekileyo kubungakanani nakwiimilo kuya kufumaneka ngesicelo. Ukufakwa kweFibggass kuyathandwa kakhulu njengoko kubonakaliswa ngu: • Amandla amakhulu ngokunxulumene nobunzima • Ukufakelwa kombane kunye nokufudumeza amandla • Ukumelana nokutsala kunye neekhemikhali • Ukumelana nefuthe ...
Iipaneli zejrain zenziwe isiqwenga esinye kwaye zibonisa umphezulu wokuhamba we-concave ongahambeli ndawo. Iiphaneli ezisebenzayo ezinamaxabiso zivumela ukusikwa okusebenzayo kwindawo ukuze kuncitshiswe inkunkuma kunye nemithwalo ethwele imithwalo kuzo zombini iindlela ivumela ukusetyenziswa ngaphandle kwenkxaso yecala eqhubekayo. I-fiber ye-fiber ye-fiber ye-fiber ehlanganisiweyo ilula kakhulu kunobunzima bentsimbi kwaye umxholo we-resin ephezulu unikezela ukuchasana kakuhle kwe-kutu kwaye kufuna ulondolozo oluncinci kakhulu. Into ephezulu yokhuseleko iyenzeka ...
Imibhobho ye-Fibglass ibandakanya imibhobho ecocekileyo ye-fiberglass, imibhobho yesanti, imibhobho yokufakelwa, imibhobho emibini yamalahla (ene-PVC, CPVC, PE, PP, PVDF, njl.njl.) Njalo ke nakulwakhiwo lodonga lwendlela yombhobho yefayibha yeneelitha ezintathu: 1．I-liner: ibeka ubungakanani obuchasayo bokuphakathi. 2．Ubume bokubumba: bunika amandla oomatshini aphezulu kunye nokuxhathisa kwimithwalo. 3．Ingubo ephezulu: ikhusela inkqubo yombhobho kwimozulu, ukungena kwamachiza kunye nemitha ye-UV. Baziwa kakhulu kwimizi mveliso emininzi ...
I-Jrain FRP, e-Hengshui City yase China, ngumenzi wemveliso eyinxalenye. Senze iimveliso ezahlukeneyo zeplastiki eziqinisiweyo zeplastiki (iFRP) ukusukela ngo-2008 kwaye sisasebenza ekuphuculeni imveliso, inkqubo kunye nophuhliso lweemarike. Ukuza kuthi ga ngoku sinendawo yokusebenzela engama-5000m2, esinomatshini wokuhambisa umoya, izixhobo zokusebenza kunye nezikhunta, njl njl. Siyaqinisekiswa yiNkqubo ye-ISO9001 yoLawulo loMgangatho. Sixhotyisiwe ngeelebhu ezinxulumene nezixhobo zovavanyo ze-FRP. Siqhelene neekhowudi ezininzi ezinxulumene namanye amazwe kwaye emva koko senze iimveliso ezisekwe kuzo njenge-ASME, ASTM, BS EN.
HENGSHUI JRAIN FRP CO, CO.
IINDLELA ZOKUGQIBELA NGEJRAIN
I-Sinochem kunye ne-Shanghai Chemical Institute ngokudibeneyo ukuseka ilabhoratri enikezelwe kwizinto eziyinxalenye
IZiko loPhando lweSinochem International kunye neShanghai yeMveliso yeChemical Co., Ltd. (IZiko leSinyithi leShanghai) ngokudibeneyo laseka i "Sinochem - I-Shanghai Chemical Institute Composite Equipment yeLabhoratri edibeneyo" eShang Zhangjiang Hi-Tech Park. Le yenye into yokungenisa elizweni ...
Abaphandi baseTshayina bakhula nge-superelastic hard carbon nanofiber aerogels
Iphefumlelwe kukungqinelana kunye nokuqina kwe-silk yendalo yesigcawu, iqela lophando elikhokelwa nguNjing. YU Shuhong ovela kwiDyunivesithi yeSayensi kunye neTekhnoloji yeTshayina (i-USTC) iphuhlise indlela elula nethe gabalala yokuqulunqa amandla amakhulu e-carbon aerogels kunye nokukhathala okumelana ne-carbon aerogels nge nanofibrous ...
I-AOC Aliancys yaqala ukuvelisa ii-AOC Resins eTshayina
I-AOC Aliancys ibhengeze: I-AOC Aliancys (Nanjing, China) yaqala ukuvelisa i-AOC ress ngokwefomula engeniswe kwi-headquarter e-USA Yonke idatha yeemveliso ezintsha ihlangabezana neemfuno zoyilo, oko kuthetha ukuba iimveliso zohambo lwaseMelika ze-AOC Aliancys ezingeniswe ngaphakathi I-China ngokusesikweni ...
Hayi. 1289, Isitalato i-Yingbin South, kwiSithili saseJizhou, eHengshui, Hebei, China
Umatshini womoya we-FRP, Umatshini wokuhambisa umoya we-GRP, Ukohlwa okuBumbileyo, Mold, I-Fiberglass ebunjiweyo, Umatshini wokudubula weFibglass,